-Dhacdo Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha Xakamaynta Heerkulka Caaga ee Shiinaha |Halyey-Tech
Xakamaynta heerkulka caaryada
Qaboojiyaha Nooca Biyaha Qaboojiye
Qaboojiyaha Heerkulka Hoose ee Biyaha-qaboojiyey
Horudhaca Alaabta MTC waxaa inta badan loo shaqeeyaa si loo dhimo waqtiga kulaylka caaryada, xakamaynta heerkulka caaryada, ka hortagga calaamadaha socodka, ama ifafaalaha kale ee aan loo baahnayn ee dusha sare ee la qaabeeyey, xakamaynta heerkulka joogtada ah.Codsiga Wershadaha Caagagga & Kaabadaha Dhimashada Warshadaha: Zinc, Aluminum, iyo Magnesium.Ku-tiirsanaan, wax-qabad badan, qaboojin heersare ah.Qaboojiyaha HERO-TECH waxay qiimeeyaan codsiyo kala duwan oo kala duwan oo leh xulasho waxtarka tamarta la xoojiyay.Astaamaha Naqshadeynta -Nidaamka kombuyuutarrada yar yar...
baakad iyo gaadiid
MTC waxaa inta badan loo shaqeeyaa si loo yareeyo waqtiga kulaylka caaryada, xakamaynta heerkulka caaryada, ka hortagga calaamadaha socodka, ama ifafaale kale oo aan loo baahnayn oo ku yaal dusha sare ee caaryada, xakamaynta heerkulka joogtada ah.
Warshadaha caagagga ah & caagga
Dhirta warshadaynta: Zinc, Aluminum, iyo Magnesium.
Ku-tiirsanaan, wax-qabad badan, qaboojin heersare ah.
Qaboojiyaha HERO-TECH waxay qiimeeyaan codsiyo kala duwan oo kala duwan oo leh xulasho waxtarka tamarta la xoojiyay.
-Nidaamka kumbuyuutarka ee la qaatay, PID auto heerkulka xakamaynta, awood u leh inuu xakameeyo heerkulka saliidda iyo biyaha gudaha ± 1 ℃.
- Foosto kuleyliyaha birta ah oo qalabaysan, waxay muujisaa kuleyl degdeg ah iyo qaboojin, fududahay in la nadiifiyo.
-Bamka heerkulka sare leh oolnimada sare la ansixiyay,
wuxuu leeyahay cadaadis sare, qulqul weyn, buuq yar iyo xasillooni sare.
-Ganacsatada isku dhafan, roogga ah iyo budada dahaarka leh oo leh muuqaal xarrago leh, dhinacyada siideynta degdega ah ayaa bixiya dayactir sahlan.
-Ku qalabaysan alaarmiga iyo tilmaamayaasha cilladaha badan, marka cilladu dhacdo, alaarmiga wuxuu si toos ah u dhawaaqi doonaa, code qaladka ayaa muujinaya, macaamiisha ayaa ogaan doona qaladka iyo sababta marka ugu horeysa, iyo waqtiga, taas oo ah dammaanad qaadista badbaadada nidaamka.
-Ku qalabaysan qalab ilaalin oo isku xigxiga wejiga,qalabka ilaalinta gaaban ee hadda jira,qalabka ilaalinta heerka dareeraha,xilliga elegtarooniga ah,iwm.
Kooxda-Processional: Kooxda injineernimada celcelis ahaan 15 sano oo waayo-aragnimo ah qaboojinta warshadaha, kooxda iibka oo leh celcelis ahaan 7 sano oo waayo-aragnimo ah, Kooxda adeegga celcelis ahaan 10 sano oo waayo-aragnimo ah.
-Xalka la habeeyey oo had iyo jeer loo keeno si waafaqsan shuruudaha.
-3 tillaabo xakamaynta tayada: ilaalinta tayada soo socota, ilaalinta tayada habka, ilaalinta tayada baxaysa.
-12 bilood oo dammaanad ah dhammaan alaabooyinka.Dammaanad gudaheed, dhibaato kasta oo ay keento cilladaha qaboojiyaha laftiisa, adeegga la bixiyo ilaa dhibaatada la xalliyo.
Afar faa'iido oo HERO-TECH
Awood calaamad: Waxaan nahay xirfadleyda iyo iibiyaha ugu sarreeya ee qaboojiyaha warshadaha leh 20 sano oo waayo-aragnimo ah.
Tilmaanta Xirfadlaha: Xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah iyo kuwa khibradda leh & adeegga kooxda iibka ee suuqa caalamiga ah, oo bixiya xal xirfadeed sida waafaqsan shuruudaha.
•Shaqaalaha xasiloon:Shaqaalaha xasiloon waxay xaqiijin karaan wax soo saar deggan oo tayo sare leh.Si loo hubiyo adeeg tayo sare leh iyo taageero wax ku ool ah ka dib iibka.
Adeegga Dahabka ah: Ka jawaabista adeegga 1 saac gudahood, xalka waxaa lagu bixiyaa 4saac gudahood, iyo koox u gaar ah rakibidda iyo dayactirka dibadda.
Kala duwanaanta heerkulka ℃
Awood kuleyliyaha kw
Condenser Awoodda matoorka kw
socodka ugu badan L/min
Cadaadiska ugu badan Kg/cm2
Dhexroorka isku xirka Xiriirinta inji
Tirada soo galitaanka & ka bixista
Dhuumaha biyaha qaboojinta inji
Cabirka Dhererka mm
Miisaanka saafiga ah kg
Fiiro gaar ah: Cadaadiska biyuhu waa inuu ka weynaadaa 2kg/cm2 halka nooca biyuhu uu yahay caaryada
kantaroolaha heerkulka ku xiran biyaha tuubada.
Haddii ay jiraan shuruudo gaar ah, fadlan nala socodsii.
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka bedelno qeexitaannada ogeysiis dheeri ah la'aan.
Q1: Miyaad naga caawin kartaa inaan ku talinno qaabka mashruucayaga?
J1: Haa, waxaanu haynaa injineer si uu u hubiyo tafaasiisha oo uu kuu doorto qaabka saxda ah.Iyadoo lagu saleynayo kuwan soo socda:
1) Awoodda qaboojinta;
2) Haddii aadan aqoon, waxaad siin kartaa heerka socodka mashiinkaaga, heerkulka gudaha iyo heerkulka ka baxsan qaybtaada isticmaalka;
3) heerkulka deegaanka;
4) Nooca qaboojiyaha, R22, R407c ama mid kale, pls caddee;
6) Warshadaha codsiga;
7) Shuruudaha socodka bamka iyo cadaadiska;
8) Shuruudaha kale ee gaarka ah.
Q2: Sidee loo hubin karaa alaabtaada tayada wanaagsan?
A2: Dhammaan alaabadayada leh shahaadada CE iyo shirkadeena waxay si adag u hoggaansamaan nidaamka maaraynta tayada ISO900.Waxaan isticmaalnaa qalabyada caanka ah ee caanka ka ah caalamka, sida DANFOSS, COPLAND, SANYO, BITZER, HANBELL kombaresarada, qaybaha korontada ee Schneider, DANFOSS/EMERSON qaybaha qaboojiyaha.
Cutubyada si buuxda ayaa loo tijaabin doonaa baakadda ka hor, baakayntana si taxadar leh ayaa loo eegi doonaa.
Q3: Waa maxay dammaanadda?
A3: 1 sano oo dammaanad ah dhammaan qaybaha;Nolosha oo dhan waa bilaash!
Q4: Ma tahay wax soo saaraha?
J4: Haa, waxaan ku haynaa in ka badan 23 sano ganacsiga qaboojinta warshadaha.Warshadayada oo ku taal Shenzhen;Ku soo dhawoow inaad na soo booqato wakhti kasta.Sido kale ku hay shahwad ku saabsan nashqada qaboojiyeyaasha.
Q5: Sideen u dalban karaa?
A5: Su'aalaha noogu soo dir email ahaan: sales@szhero-tech.com, naga soo wac lambarka Cel +86 15920056387 si toos ah.